FOSSi Foundation: tsvaga kuti iyi nheyo isinganzwisisike chii | Linux Vakapindwa muropa
Zvirokwazvo iwe unotoziva iyo Linux Foundation, kana Iyo Gwaro Sisekelo, Iyo Apache Software Foundation, Raspberry Pi Foundation, Yemahara Software Foundation (FSF), nezvimwe, asi… Wakambonzwa nezvazvo FOSSi Nheyo? Kana zvisiri, inguva inguva iwe yaunoziva kuti ino isiri-purofesa hwaro chii uye zvinangwa zvayakagadzirirwa.
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti FOSSi inoenderana nechidimbu Yemahara uye Yakavhurwa Sosi Silicon. Uye basa rayo nderekusimudzira uye kubatsira mahara uye akavhurika Hardware dhizaini, pamwe neese ecosystem ane hukama nemapurojekiti aya. Uye zvakare, iro rakazara rakavhurika, rinosanganisirwa, uye revatengesi-vakazvimiririra boka.
Iyo FOSSi hwaro yakasikwa neboka revanhu kubva ku Hardware indasitiri uye vadzidzi. Mumwe nemumwe achipa ruzivo rwakakura rwebasa mu open source mapurojekiti yakatarwa mukati medhi yedhijitari uye yakasanganiswa dhizaini.
Iyo huzivi hweFOSSi Foundation ndeyekusimudzira izvo zvikamu uye masisitimu ayo ari mukati memachipisi zvinogona kugadzirwa uchishandisa mahara uye akavhurika sosi mabhuroko. Naizvozvo, nhevedzano yezvinangwa zvakaiswa, senge:
Tsigira nekusimudzira kuvandudzwa kwematanho akavhurika, pamwe nekushandisa kwavo
Tsigira zviitiko zvemunharaunda uye nekugamuchira zviitiko nguva dzose.
Kurudzira indasitiri kutora chikamu mune yakavhurika sosi IP dhizaini.
Batsira hobbyists uye masosi ezvidzidzo kuvhura basa ravo kuruzhinji.
Tsigira kuvandudza uye kugadzirisa kwewebhu webhusaiti inoitirwa kupa yemahara uye yakavhurika sosi chikuva.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kana iwe uri wega unogona batsira kuFOSSi, uye kana iwe uri kambani unogona kutsigira kuburikidza kutsigira kana zvipo zvemunhu. Uye kana iwe uchida kubatana, kudzidza, kana kutanga yemahara Hardware chirongwa, iwe unogona zvakare kutarisa www.mukirana.com.
Mamwe mashoko - Webhusaiti yepamutemo yeFOSSi Foundation
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » FOSSi Foundation: ziva kuti iyi nheyo isinganzwisisike chii
Ubuntu Cinnamon, Kubatana uye DDE: mhuri inokura ... kana ichaita
OpenXR nguva yekumhanya "Monado" inopasa bvunzo dzekuteerera